Qualcomm Inoti Ichafananidza iPhone Chiso Kuzivikanwa paKutevera Android Midziyo | IPhone nhau
Kuonekwa kwechiso iyo inokwidza iyo nyowani iPhone 8 mamodheru hapana mubvunzo imwe yenyaya zhizha rino uye ndezvekuti sezvo zvichizivikanwa kuti iyo iPhone inogona kuita isina yakakosha Kubata ID, zvese zvinotarisana nekutarisana nechiso.
Mukutaura, iyi nzira yekuvhura iyo itsva Apple modhi haizove seizvo isu tese tinoziva nhasi uye chaizvo ino system ingangosanganiswa ne3D sensors kudzivirira iyo yakapusa pikicha kubva kuvhura chimbo sezvinoonekwa mune mamwe madhivha, asi Qualcomm inobuda kunze kutaura kuti iyi nyowani tekinoroji ichauyawo kune zvishandiso zvine Android inoshanda sisitimu pamusoro pemwedzi mishoma inotevera.
Hatina kukahadzika kuti izvi ndizvo zvichaitika uye ndezvekuti kunyangwe chiri chokwadi kuti nzira yatinayo nhasi yakachengeteka, nekukurumidza uye inoshanda kuvhura iyo iPhone uye ese maAroid zvishandiso yaive pano kuti igare nekuzvisimbisa musika kana Apple yaishandisa. Ichokwadi kuti Apple haina kugadzira Touch IDHapana munhu anogona kutaura izvozvo, asi ichokwadi kuti kubvira payakasvika mu iPhone 5S kuvandudzwa kwesystem ino kwakaratidzirwa mune mamwe maiseti kunze kweApple.
Iye zvino Qualcomm inotaura kuti nzira iyi kushandisa kuzivikanwa kwechiso ichakurumidza uye nekujeka, izvo zvazvinofanira kunge zviri uye pane anotevera Android mamodheru ichagadziriswa zvisina mushe nekutenda kune yayo nyowani yechipiri-chizvarwa Spectra ISP machipisi yekuzivikanwa:
Muchidimbu zvaive zvakadaro kudzokororwa kwechip iyo mamwe madivayiri eApple ari kushandisa nhasi uye padyo nekamera chishandiso ichi chinozovandudza zvakanyanya mukuzivikanwa. Uye zvakare, sezvinoonekwa muvhidhiyo iri pamusoro, pamwe nekamera yechigadzirwa pachayo, kuzivikanwa kwechiso uye kwemaoko kuchavandudza zvakanyanya muchizvarwa ichi chechipiri chemachipisi, saka Qualcomm inogutsikana kuti ichaenderana neiyo itsva iPhone.
Kwechinguva Tichakamirira kuti tione izvo Apple zvinotiratidza uye kana zvichazoita chaizvo kana Pasina ID muiyi iPhone nyowaniIpapo tichaona zvinoitika nevamwe vese uye kuti vanochinjisa sei tekinoroji iyi kune avo matsva madhizaini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Qualcomm inoti ichaenderana ne iPhone kumeso kuziviswa pane anotevera Android zvishandiso